အလုပ်လက်ခံရရှိခြင်းမှ တားမြစ်ခံထားရခြင်း – Driver
လက်ခံရရှိသောအလုပ်များအား အကြိမ်များစွာဆက်တိုက်ပယ်ဖျက်မိပါက သင့်အား ‌ခေါ်ယူ၍မရရှိနိုင်သော (Unavailable) အခြေအနေသို့သတ်မှတ်ခံရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး အလုပ်လက်ခံရရှိခြင်းအား ‌ခေတ္တရပ်နားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သင့်ရဲ့ Grab ယာဉ်မောင်း app တွင် unavailable အခြေအနေဖြင့် မည်မျှကျန်ရှိနေမည်ကိုပြသနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြသထားသောအချိန်ကုန်သွားသောအခါ ရပ်နားထားခြင်းပြီးဆုံးကြောင်းကို အသိပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Unlock အားနှိပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်များပြန်လည်လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Stay Unavailable နှိပ်၍လည်း unavailable အနေအထားဖြင့်ဆက်နေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Grab ယာဉ်မောင်း app တွင်ကြာချိန်အားပြသပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ အလုပ်အားလစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် ပါယ်ဖျက်ခြင်းများက အချိန်ပိုကြာစေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Driver Timeout လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားတွေအတွက် သက်ရောက်မှုရှိမှာလဲ?
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ သင်အသုံးပြုဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းမှာ သက်ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Driver Timeout လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Grab driver app ရဲ့ version အကုန်လုံးကိုသက်ရောက်မှုရှိမှာလား ?
ဟုတ်ပါတယ်။ Grab Driver app ရဲ့ version အားလုံးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘Passenger no show’, ‘Passenger is withachild’, ‘Too many passengers or luggage’ စသော အကြောင်းများကြောင့် ခရီးစဉ်အား ပယ်ဖျက်ရပါက Timeout အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ပါသလား ?
Cancellation rate အား ထိခိုက်မှုမရှိသော ယာဉ်မောင်းဖက်မှ ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်မှုများကြောင့် Timeout ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။
ခရီးသည်မှ ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်မှုကြောင့် Timeout ဖြစ်နိုင်ပါသလား ?
ခရီးသည်ဖက်မှ ပယ်ဖျက်မှုကြောင့် Timeout မဖြစ်စေနိုင်ပါ။
အကယ်၍ သတ်မှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးသွားသော်လည်း အလုပ်များလက်၍မရနိုင်ပါက ‌အောက်ပါ ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်၍ ကျွန်ုတို့အား အသိပေးနိုင်ပါတယ်။